Shiinaha Yaskawa Qabashada Robot Motoman-Gp25 warshad iyo soosaarayaasha | Jiesheng
Ku Yaskawa MOTOMAN-GP25 robotka ujeeddada guud, oo leh hawlo hodan ah iyo qaybo muhiim ah, wuxuu dabooli karaa baahiyaha adeegsadayaal fara badan, sida qabashada, gundhigga, isu keenida, shiida, iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran.
Ku Yaskawa MOTOMAN-GP25 ujeedo guud maaraynta aaladda, oo leh hawlo hodan ah iyo qaybo muhiim ah, waxay dabooli karaan baahiyaha adeegsadayaal fara badan, sida qabashada, gundhigga, isu geynta, shiida, iyo ka shaqeynta qaybaha ballaaran.
MOTOMAN-GP25 caalami ah maaraynta aaladda wuxuu leeyahay culeyska ugu badan ee 25Kg iyo ugu badnaan 1730mm. Waxay leedahay xamuulka ugu sarreeya, xawaaraha iyo curcurka oo loo ogol yahay fasalkeeda. Waxay ku guuleysan kartaa awoodda wareejinta sare, xulashada ugu habboon ee ka baaraandegidda dufan ballaaran iyo codsiyada baakadaha. Naqshadeynta yareynta faragelinta waxay u oggolaaneysaa inay si dhow ula shaqeyso aalado kale oo aan carqalado lahayn, waxaana loo isticmaali karaa wax ka qabashada, soo qaadista / xirxirashada, pallatizing, uruurinta / xirxirida, iwm.
Qeybta curcurka ee MOTOMAN-GP25 robot waxay qaadataa heerka IP67, iyo qaab-dhismeedka adag ee ka-hortagga fara-gelinta waxaa loo soo saari karaa iyadoo u dhiganta saldhigga wadajirka Hagaajinta wax soo saarka. Tirada fiilooyinka udhaxeeya robot-ka iyo kabadhada koontaroolka ayaa laga dhimay labo ilaa hal, taas oo si weyn u yareyneysa waqtiga badalka joogtada ah ee fiilada, hagaajinaysa joogtaynta iyo bixinta qalab fudud.
250kg 2.0kva 210 ° / Seken 210 ° / Seken
265 ° / Sec 420 ° / Seken 420 ° / Seken 885 ° / Sec
MOTOMAN-GP25 wuxuu qaataa qaab dhismeed gacmeed banaan, kaas oo ku dari kara fiilooyinka dareemayaasha iyo dhuumaha gaaska si loo yareeyo faragelinta u dhexeysa cududda iyo qalabka durugsan, iyo xawaaraha isku-dhafka waxaa lagu kordhiyay ilaa 30% marka la barbar dhigo moodooyinka jira. Waqtiga wareegga waa la dhimay oo la hagaajiyay. Waxsoosaarka waxsoosaarka wuxuu u abuuraa qiime sare shirkadda.
Hore: Yaskawa Lix-dhidibka Qabashada Robot Gp20hl
Xiga: YASKAWA robot maarayn caqli leh MOTOMAN-GP35L
Aaladda otomaatiga ah ee Robot
Robotka Gacanta Warshadaha
Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka
Warshadaha Qabashada Warshadaha Gacanta, Robotka Gacanta otomaatiga ah, Nidaamyada Maaraynta Qalabka Robotka, 6 Axis Qabashada Robot, Aaladda otomaatiga ah ee Robot, Qabashada Gacanta Robot,